Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Benjamin Pavard Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of Football Genius onye aha ya kacha mara; "The New Thuram". Ụmụ Benjamin Pavard Child Akụkọ ya na akụkọ na-enweghị isi akụkọ eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere aha 2018 World Cup na aha ya na ebe niile echedoro. Otú ọ dị, nanị ole na ole tụlee Benjamin Pavard's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Benjamin Pavard Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Ndụ mbido
A mụrụ France, bụ Benjamin Pavard, na 28 March 1996 na Maubeuge, Nord, France. Ọ bụ nne na nna ya mara mma ka a zụlitere ya site na ndị dị umeala n'obi.
Dị ka ọ dị ná mmalite ịdị umeala n'obi, papa Pavard tọrọ ntọala maka ọrụ nwa ya ọ hụrụ n'anya n'oge na-adịghị anya. Dị ka Benjamin Pavard si kwuo ya;
'Ezigbo enyi m na-eburu m apụ kwa ụbọchị, nke ahụ mere m ji etinye ya n'ahụ m. Enweghị ihe eji egwuri egwu ma ọ bụ egwuregwu mgbe m dị obere, naanị football. Ana m enwe ekele maka ihe niile o mere. Papa m na-agba m ume mgbe niile. Enweghị ya, agaghị m enwe njem a dị ịrịba ama nke m na-eme ugbu a. '
Benjamin Pavard Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Ndụ mmekọrịta
O doro anya na ọ bụ kpakpando nke 2018 FIFA World Cup. Ike egwu na ike nke Pavard, nakwa na ndụ ya si na pitch, na-ewuli ya zuru ezu.
Dị ka n'oge ederede, Rachel Legrain-Trapani nke dị n'okpuru ebe a bụ enyi nwanyị nke Benjamin Pavard.
Mgbe ha na-ebute mmekọrịta ha na mbụ, Legrain-Trapani na Pavard na-aga n'ihu ọha na mmekọrịta ha na May 2018. Legrain - Trapani bụ onye na-eme ihe ịma mma nke na-achọ ịma mma (Miss France, 2007).
N'ịbụ ndị na-eme ka ọha na eze mara banyere mmekọrịta ha n'ihu 2018 World Cup, Rachel Legrain-Trapani jidere anya nke ụwa bụ onye mara na ọ bụ enyi nwanyị Pavard n'oge 4-3 France meriri Argentina na 16 ikpeazụ nke Russia 2018. Ọ na-ele anya na-agbasi mbọ ike ka ọ na-etiri ya mma site na nkwụda ahụ.
Ma ndị hụrụ ya n'anya nwee mmekọrịta siri ike nke e wulitere na ọbụbụenyi. Rachel dị afọ asaa karịa nwoke ya dị ka onye a na-ahụ anya na ya n'enweghị ihe etemeete.
Ka o sina dị, ọ na-ele anya mara mma dịka ekpughere na foto dị n'okpuru. Ọdịdị mara mma nke Legrain-Trapani pụrụ ịbụ ihe mere Miss France 2007 ji merie ya na ihe mere Benjamin Pavard ji hụ ya n'anya.
Benjamin Pavard Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Enwetakwu banyere enyi ya nwanyị, Legrain-Trapani
A maara mma mara mma, onye na-egwu egwuregwu onwe ya, na mmekọrịta dị elu, na-enwe ihe maka kpakpando egwuregwu. Site na 2007-2009, Legrain-Trapani ji obi ụtọ na-emetụta Ladji Doucouré, onye na-eme egwuregwu asọmpi.
Na 2013, ọ lụrụ di na nwunye FC Nantes Aurélien Capoue na agbamakwụkwọ ngosi na Abbey nke Saint-Florent-le-Vieil.
Na 2016, ụzọ abụọ ahụ na-akpọ oge na alụmdi na nwunye ha na ịma mma 2007 Miss French bụ azụ ahịa ọzọ. Mgbe ha malitere ibido mmekọrịta ha na Legrain-Trapani Pavard gara n'ihu ọha na ima ha na May 2018.
Banyere mgbọrọgwụ ya: Rachel Legrain-Trapani bụ nwa nke ndị Itali kwabatara na Saint-Saulve na August 31, 1988. Nne na nna Rechel gbara alụkwaghịm mgbe ọ ka bụ nwata. Nne ya, Silvana bụ onye odeakwụkwọ zụrụ Rachel n'onwe ya. O nwere ọkara ụmụnna-ya bụ Ruben na Melvin. N'ile anya foto nke di n'okpuru a, o nweghi ike ighota onye bu nne na nwa.
Benjamin Pavard Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
N'afọ 2002, mgbe Pavard dị afọ 6, mmasị ya maka football hụrụ ya ka ọ debanye aha na otu ìgwè ndị ntorobịa nọ n'ógbè ahụ, bụ US Jeumont onye nyere ya ohere iji gosipụta talent ya.
Mgbe ọ dị afọ 10, ndị nne na nna ya tụlere ịkwaga nwa ha n'ọtụtụ agụmakwụkwọ football. Ebe ọ bụ na ha ka chọrọ nwa ha ịga ụlọ akwụkwọ na afọ ahụ, nne na nna malitere ịchọta ụlọ akwụkwọ nke ga-enye Pavard aka ịgba egwu asọmpi. Ụlọ akwụkwọ ndị na-abanye n'ụlọ akwụkwọ dị na Lille ka ndị mụrụ ya họọrọ. Pavard aghaghị ịga ule site na Lille agụmakwụkwọ ọ gafere. Dị ka Benjamin na-ewepụta ya;
M hapụrụ ụlọ n'oge mbụ. Ndị mụrụ m gara ọtụtụ kilomita iji hụ m. Agaghị m ekele ha maka ihe ha meere m.
Mgbe Lille, Benjamin Pavard chọsiri ike ịga pro ọ bụghị nanị ihe na-agafe agafe. N'oge ahụ, o nwere steely mkpebi siri ike nke mere ka nrọ ya mezuo mgbe ọ na-emefu afọ 10 na agụmakwụkwọ.
Benjamin Pavard Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Nchịkọta Ọrụ
Mgbe o gosichara oge 25 maka Lille ihe karịrị oge abụọ, Pavard malitere inwe mmetụta na enweghị ntụkwasị obi maka ụlọ ọrụ ahụ n'ihi enweghi egwuregwu nke mbụ. Pavard hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ na Stuttgart na 2016. Na Germany, Pavard nwere mmetụta karịa n'ụlọ. O wetara nne ya na papa ya ezigbo obi ụtọ (dị n'okpuru ebe a) mgbe o duuru ìgwè Stuttgart ka ha merie Bundesliga na oge 2016 / 17.
Onye French na-enwe obi ụtọ na ndụ na Germany ebe ọ chọtara ntụkwasị obi ọ nọ na Lille. N'okwu ya;
"Ihe niile dabara. Obodo na-enye ọtụtụ ihe, ámá egwuregwu ahụ jupụtara mgbe niile, enwekwara m ike inwe obi ike nke onye nchịkwa, ndị otu m na ndị ọrụ m, "
Benjamin Pavard Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Na-eto Eto
Tupu 2018 FIFA World Cup na Russia, ikike Pavard na-emeso ndị a ma ama maka VfB Stuttgart club ya dị nnọọ mkpa na ya nwere ike ijikwa bọl ahụ. Mgbe a na-akpọ Pavard maka ndị isi mba France na nke mbụ na 2017, ọ na-enwe ezumike nri ehihie mgbe ọ gụsịrị asụsụ German ma ọ chọpụtaghị na ọ funahụ ọtụtụ nne na nna ya.
Onye na-agbachitere France na-akpọ ndị mụrụ ya azụ wee tie mkpu ákwá nke ọṅụ mgbe ha nyefere ya ozi obi ụtọ. N'oge na-adịghị anya, ọ gara n'ụlọ iji soro nne na nna ya kerịta obi ụtọ.
Onyinye nile o mere kemgbe ọ bụ nwa nwoke mesịrị kwụọ ụgwọ na Russia 2018 FIFA World Cup. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Benjamin Pavard Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Eziokwu nke Onye
Benjamin Pavard bụ nanị nwa nke ndị mụrụ ya. O nweghị nwanne ma ọ bụ nwanne. Ile anya na ezinụlọ ya na-ekpughe ihe nkedo zuru okè n'etiti Pavard na nne ya.
A maara pavard maka ntutu isi ya na anya elekere anya oge ochie. A kpọrọ ya "Jeff Tuche"Site na ndị ọrụ France ya mgbe nna ha gụchara ntutu na fim"Les Tuches. "
Benjamin Pavard echewo na ọ bụ ọrụ ya na onye nkụzi ya, bụ onye France mbụ Lilian Thuram. Benjamin Pavard na-etinye oge ka ukwuu n'ime oge ya site n'aka onye nkụzi ya
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Benjamin Pavard Childhood akụkọ na akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.